Soomaalidii Sweden uga guurtay UK oo dhawaan soo qixi doona! | Somaliska
Sida aad la socotaan shalay shacabka UK waxay si lama filaan ah u codeeyeen in ay isaga baxaan midowga Yurub, taasoo keentay qalalaase degdeg ah oo qaasatan ku yimid suuqyada lagu kala iibsato sheerarka iyo sarifka lacagaha qalaad iyo raysal wasaare David Cameron oo iscasilay. Balse waxaa sidoo kale soo baxaya dhibaatooyinka soo fool leh labada sano ee nagu soo aadan xiligaas oo UK ay si rasmi ah uga bixi doonto EU.
Raysal wasaare Cameron ayaa ku dhawaaqay in uusan hadda diyaar u ahayn in uu codsiga bixitaanka si rasmi ah ugu diro EU, balse waxaa laga yaabaa in UK lagu qasbo in ay degdeg u soo gudbiso codsigii ay ku bixi lahayd. Qaar badan oo ka mid ah dadka soo galootiga ah ee ka yimid wadamada kale ee Yurub ee ku nool UK ayaa waxaa la soo daristay cabsi weyn oo ay ka qabaan in laga soo ceyriyo wadankaasi. Hadaba taasi ma dhici kartaa?
Jawaabtu waa haa, inkastoo aysan dhici doonin labada sano ee soo socota inta ay jiraan wadahadalada u dhexeeya UK iyo EU. Markii ay UK si rasmi ah uga baxdo EU ayaa waxaa meesha ka baxaya xuquuqdii dadka ka soo jeeda wadamada EU ay ku joogeen halkaasi, sida Soomaalida ka guurtay Sweden ee wali haysata baasaboorka Swedishka ah. Kuwaasi ayaa ku qasbanaan doona in ay ku laabtaan halkii ay ka yimaadeen.
Dhibaatadaan ayaa ah mid la wadaagi doonaa, maadaama dadka u dhashay UK ee ku nool 27-ka wadan ee ku haray EU iyagana lagu qasbi doono visa in ay qaataan oo ay degenaansho codsadaan.
Balse waxaa macquul ah in UK iyo EU ay heshiis ku galaan in suuqa xorta ay ka sii mid-ahaato taasoo micnaheeda uu yahay in dadka reer EU ay si xor ah ugu noolaan karaan UK. Inkastoo taasi aysan degdeg ku dhici doonin, oo qaasatan dowlada Germany ay cadeysay in aysan aqbali doonin in UK degdeg xubin uga noqoto suuqa xorta ah ee EU-da . Haddii UK loo diido suuqa xorta ah ayaa waxaa soo wajihi doona dhibaatooyin dhaqaale oo balaaran, socdaalka iyo siyaasada ah.
Sidoo kale dadkii ku hami-weynaa in ay u guuraan UK ayay hadda aad ugu adkaan doontaa arintaasi maadaama xaaladu isbedashay isla markaana dhaqaalaha UK uu hadda noqonayo mid hoos u dhac weyn ku yimaada.
wlhi waa arin adag oo xaalad kacsanan ah ku jirta kheyrka alle ha qadaro waxan ka naxsanahay dadka masiikiinta ah ee u guuray UK dhibaatada ka soo gaari karta kuwa doonaya in ey u guuraan oo aan aniga ka midahay wakhti ayey heysaan
Kuwii uguuray UK 5 sano kahor, british medborgerskab ayee codsankareen ayaan filayaa.
Maxaa Norway ayada xitaa EU kama tirsano waana lees dhaxdegan yahay dad waxan aqana dhalasho Norway wato pop Swedan degan Marka MA kala duwanyihiin?
Wadamada Scandinavianka sharci gooni lagu magacaabo Nordiska konvention ayaa kadhaxeeya. Weey isku guuri karaan bilaa sharuud.